GoPro Hero5မှာ 4K ရှိသလား။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > သူရဲကောင်း ၅ - Amazon ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သူရဲကောင်း ၅ - Amazon ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
GoPro Hero5မှာ 4K ရှိသလား။
ယောက်ျားတွေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ၊ ငါ Authentic ben ကလာတာပါ။ ဒီနေ့ငါ Gopro Hero6အသစ်နဲ့သူ့အရင် V ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသဖို့စူပါ pumped ပဲ။ အခုငါ unboxing ကိုအမြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ မနေ့ကဆောင်းပါးမှာသင်အရင်ကမတွေ့ဖူးခဲ့ရင်ဒီဟာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် Gopro6အသစ်ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ features အသစ်တွေနဲ့ specs တွေကိုအသံသွင်းတယ်။ Hero5မော်ဒယ်အဟောင်းအကြောင်းအဆင့်မြှင့်တင်သင့်တယ်။ အချို့သောပြင်ပနေ့ခင်းအလင်းရောင်စစ်ဆေးမှုကိုကျွန်ုပ် 4k 30fps ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်အသစ် ၆ ခုသည်ယခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောတစ်ခုဖြစ်သည့် mode တွင်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ultra-ultra wide angle နှင့်ရှုခင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများစွာကို frame ထဲသို့ထည့်သည်။
အသစ်တည်ငြိမ်မှုသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်တိုးတက်လာသော AIS အသစ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် 4k အောက်မှာရှိတဲ့ resolution ကိုလျှော့ချဖို့လိုတယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ပြaနာတစ်ခုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ Youtube ဆောင်းပါးများကို 4k resolution ဖြင့်အမြဲတမ်းရိုက်ကူးနေတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်မြင့်မားသော resolution 4k30fps နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ သူတို့ပြောသကဲ့သို့တည်ငြိမ်မှု6ဝင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်ငါကကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ထင်? သူတို့က gimbal တည်ငြိမ်မှုကိုယူခဲ့ကြသည်တူသောဤအရိုက်ချက်များအချို့ဒီတော့တည်ငြိမ်ကြည့်ရှု? အရည်အသွေးကင်မရာများတွင်အီလက်ထရွန်နစ်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုရှိသည့်အပြင်ပြင်ပမော်တာတပ်ဆင်ထားသော gimbal များမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မရှိသေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကြီးမားသောတိုးတက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မြင့်မားသော frame နှုန်းနှေးနှေးရိုက်ကူးမှုပုံစံအသစ် ၆ ကို ၆ နှင့် ၅ နှိုင်းယှဉ်ပါ။ myAnnotations တွင်တွေ့ရမည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကို resolution တူညီစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းသူတို့၏ frame rate ကိုအမြင့်ဆုံးနှင့် Rican သည် 30fps timeline အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် Hero5အဟောင်းသည် 1080p အား 120fps ဖြင့်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိစေပြီး၊ Hero Six အသစ်ကတစ်စက္ကန့်လျှင် ၂၄၀ ဘောင်မှာရူးသွပ်နေပြီး၊ Hero5သည် ၂၅% နှေးနှေးသည်။ GoPro အသစ်ကထိုနှုန်းထက်ဝက်ကိုသာအသုံးပြုသည်။ နောက်ထပ် frame အသစ်နှုန်းနှေးသည်။ GoPro6သစ်သည်အနိမ့်ဆုံး 2.7K ၏ resolution ဖြင့် 120 FPS ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ GoPro အဟောင်းသည် 2.7K ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်မှာအလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော် frame frame ၏ထက်ဝက်မျှသာ 60 fps ရှိ၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ ဖရန့်သည်ဤအချက်ကိုလက်ရှိရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။e4k plus သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ 60fps ver se 30fps တစ်ခုသည်အမြန်နှုန်းထက်ဝက်ကိုနှေးကွေးစေပြီးနောက်တစ်ခုမှာအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ဆဘောင်နှုန်းကသင့်ကိုများစွာပေးသည် s ကိုပိုမိုဖန်တီးမှုလွတ်လပ်ခွင့် torytelling and editing fun ပျော်စရာကောင်းသော GoPro6အသစ်နှင့်အတူသတိပြုရမည့်အချက်များဤတွင်များပြားလှသည့်အရောင်များရှိပါသလား။ Contrast နှင့် dynamic range သည်အရောင်တစ်လျှောက်ပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။
ကောင်းကင်ကအပြာရောင်၊ တောက်ပတဲ့အစိမ်းရောင်မြက်တစ်ခုပါ။ ဒီရိုက်ချက်တွေမှာအရောင်တွေ၊ ငါရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်၊ Hero6အသစ်ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ်၊ ငါထင်ထားတာထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ပိုမြင့်တဲ့ resolution၊ နှေးနှေးနှေးကွေးမှုနဲ့ကစားရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဤနေရာတွင်လျင်မြန်သောလမ်းလျှောက်မှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် 4k 30fps ရှိစူပါအမြင်အသစ်ကိုတူးဖော်ခြင်းသည်မည်မျှချောချောမွေ့မွေ့ရှိသည်ကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းစူပါအမြင်နှင့် ၅ ဟောင်းအဟောင်းသည်သာလမ်းအတိုင်းသွားနိုင်သည် တက်အိမ်တွင်ပြောင်းလဲနေသောအရောင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါသလား။ ဤရွေ့ကား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် New GoPro ၏အသံစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသလား။ ငါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုသောနောက်ဆုံးဆောင်းပါးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာအလင်းရောင်နည်းသောအသံသွင်းခြင်း GoPro ကညသို့မဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်သောအသံသွင်းခြင်းများသည်အလွန်တိုးတက်လာသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤတွင်ဥပမာအချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤဒေသများရှိကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်များကိုသင်ရှာသင့်သောအရာများဖြစ်သည်။ အထူးများနှင့်အရိပ်များ၏? GoPro6အသစ်သည်ယခုအခါဒေါ်လာ ၅၀၀ ကုန်ကျသော Hero5ဟောင်းထက်ဒေါ်လာတစ်ရာကျော်ပိုကုန်ကျသောဒေသများ၌ Grand C တစ်ဝက်သည်အရေးပေါ်ကင်မရာတွင်ငွေတစ်တန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေစွန့်စားခန်းတွေ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်နှေးကွေးသော frame rate အသစ်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေလိုလျှင်၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထက်ပိုသောအချက်သည်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ဤခြောက်ခု၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များသည်သင့်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ထိုက်တန်ပါကရက်အနည်းငယ်အတွင်းလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရိုးသားစွာကွဲပြားလိမ့်မည်။ ငါနှိုင်းယှဉ်ဆောင်းပါး GoPro6၏ဆောင်းပါးကိုတင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး 4k ကွက်များနှင့်လည်း 4k 60fps မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမေဇုံတွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀ အသစ်ဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်း၎င်းတွင်အင်္ဂါရပ်များမတူပါ။ - GoPro6၏အနက်နက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်သည်မကြာမီလာတော့မည်ဖြစ်ပြီးလာမည့် GoPro Fusion 360 ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများသည်ဤတစ်ခုတည်းအတွက်သာကျန်တော့မည့်အချိန်အထိကျန်တော့မည်။ စစ်မှန်စွာနေထိုင်ကြပါစို့
ဘယ် GoPro5ထွက်လာတာလဲ
HERO5 အနက်ရောင်ယင်း၏ကျေးဇူးကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အဆင်ပြေမှုဟန်ချက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်4Kဗီဒီယို၊ အသံထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောထိတွေ့မှုနှင့်ရေစိုခံဒီဇိုင်း။
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့လုပ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံး GoPro ဖြစ်သည်။ Hero5Black သည်အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောကင်မရာဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသောအရာများကိုမေ့သွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ Purify Black အတွက်အမည်နာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အတူတကွစုဝေးကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအားရေစိုခံနိုင်သည့်အထုပ်တစ်လုံးတည်းရှိကိရိယာများအားလုံးကိုပေးသည်။ သူတို့ကပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုအသံကိုကျောဘက်မှထိန်းချုပ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောအရာ၏ပြည့်စုံမှုကိုရရှိသည်။ aGoPro ၏အသုံးဝင်မှုရှိခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်သည်အိမ်တစ်ခုအသုံးပြုသင့်သည်၊ မသုံးသင့်သည်ကိုမစဉ်းစားရန်မလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ရေစိုခံနိုင်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်ရှင်းလင်းသောရေဖြင့်လှည့်ပတ်ရန်မလိုတော့ပေ။ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းထားသည့်နေရာတွင်သင်သည်၎င်းကိုသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူ။ ရေထဲသို့ ၁၀ မီတာနှင်းလျောစီးကျသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောအရာများဖြစ်သော်လည်းမကြာခဏပင် GoPro သည်အကွာအဝေးမှမဝေးတော့ပါ။ အသံထိန်းချုပ်မှုသည်သင်၏ GoPro ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးသည်။ သင် GoPro လုပ်သင့်သည်ဟုသင်ထင်သည်။ ပြင်သစ်အီတလီဂျာမန်စပိန်တရုတ်နှင့်ဂျပန်အသံအသံသည်သင်၏ကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်ပြုလုပ်သမျှအရာရာတိုင်းတွင်သင့်အတွက်အပြည့်အ ၀ ထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလျော့နည်းအောင်လုပ်တာပေါ့။ တိကျတယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုသင်မလွဲသွားစေဖို့သေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာဆောင်းပါး mode မှာဖြစ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ GoPron ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို time-lapse mode နဲ့ရိုက်ပြီးပြောပြမယ်။ ၎င်းသည်ချက်ချင်းရိုက်ကူးပြီးဓာတ်ပုံ ၃၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့ပစ်ခတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောလက်ဖြင့်လွတ်လိုသည်။ ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းသည်လွတ်မြောက်စေလိုသည်။
GoPro ထဲမှာကမ္ဘာကြီးဟာအရမ်းကိုသေးငယ်တယ်၊ ငါအရမ်းနှစ်သက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ touchscreen ကိုတွက်ထုတ်ဖို့သိပ်မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်မယ်၊ မင်းလိုလားသူတစ် ဦး လား၊ တောင်ထိပ်မှာရှိနေရင်၊ မင်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတာကမင်းတို့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုကိုဖမ်းမိဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးလွယ်ကူအောင်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာသင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေ preview မှာရွေးချယ်ထားတာတွေကိုစာသားနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ သင်ရိုက်ချက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်သာဝေးကွာသောမီနူးများ။ ရွေးချယ်ခွင့်များစွာရှိသည်ကဲ့သို့မခံစားရပါ။ ၎င်းသည်တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းသည် Let's go go Hero5အနက်ရောင်၏ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုသည်သင်ကိုကမ္ဘာကြီးကိုသင်မြင်သည့်အတိုင်းဖမ်းဆီးရန်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်သူတို့ကိုသင်မကြည့်ပါ။ သင်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါသို့မဟုတ်သင့်ကလေးများကိုကမ်းခြေတစ်လျှောက်လိုက်လံလိုက်သောအခါတုန်ခါမှုနှင့်တုန်ခါမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင်၏မျက်စိသည်အရာရာကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည့်အပြင် Hero5Black ၏ပုံရိပ်တည်ငြိမ်စေသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့မှုကကောင်းသောအရာများကိုလှပစေသည်။ Wow၊ ပုံ၏တည်ငြိမ်မှုသည်ဆောင်းပါးများအားလုံးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခံစားမှုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုချောမွေ့စေသည်။
သူတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်နေဝင်ဆည်းဆာရှိသည်၊ သင်သိသည်၊ သူတို့သည်လက်ကိုင်များပေါ်မှလှုပ်ခါလိုက်ခြင်းကြောင့်သင်သတိရလိုက်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုမြင်နေရသလိုခံစားမိသည်၊ ၎င်းသည် ပို၍ ပင်အိပ်မက်မက်စေပြီးလှပစေသည်။ ကောင်းမွန်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုအနေနဲ့အသံကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ကင်မရာမှာမိုက်ကရိုဖုန်းသုံးလုံးတပ်ဆင်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ischerry - ရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီထဲကအကောင်းဆုံးအသံကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုအမှတ်တံဆိပ်လမ်းကြောင်းထဲကိုပေါင်းလိုက်ပါ။ သင်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်၊ သင်ယခုမှတ်တမ်းတင်သည့်အခါတိုင်းတွင်အိမ်မှလာသည့်အသံနှင့်မရောသောအသံမရှိပါ။ ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အသံသည်သင်ရိုက်ကူးထားသောဆောင်းပါးနှင့်ဓာတ်ပုံများကဲ့သို့ကောင်းပြီး၊ GoPro ဖြင့်အသုံးပြုလိုပါကအလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ surfboard mounts များအရသင့်ခွေး၏အမြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ ကိုမတူကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့မြင်ကြတာပါ။ သူတို့ကိုပြောင်းလဲပေးပြီးရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာကနေအများကြီးပိုသွားတာပါ။ ကျွန်တော် Hero5Black ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားပေမယ့်သူကနေရာတွေ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာကောင်းမွန်နေဆဲပါ။ သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတော်တော်များများရှိသည်။
GoPro mount သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်။ သင့်အားဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကူညီပေးပါမည် GoPro သည်ကင်မရာကုမ္ပဏီ၊ GoProsan အတွေ့အကြုံမျှဝေသည့်ကုမ္ပဏီထက်များစွာပိုသည်။ Hero 5black သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဖမ်းယူ၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သမျှသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်အများဆုံး GoPro ဖြစ်သည် နောက်ဆုံးမှာလွယ်ကူပါတယ်။ သင့် Hero5Black ကိုဖြည့်ပါ။ သင်၏ GoPro Plus အကောင့်သို့အလိုအလျောက် upload တင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်ရချင်သည့်အချိန်တွင်သင်တတ်နိုင်သည့်သင့်ကွန်ပျူတာ၌ထိုင်နိုင်မည်ဟုဆိုလိုသည် ငါတို့ရဲ့ desktop app ကိုသွားပြီး ၅ မိနစ်နဲ့ ၂ မိနစ်တည်းဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်သင်ဟာနာရီပေါင်းများစွာကြာသည်။ သင့်မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မကြာခဏရှိတတ်တယ်။ ဒါဟာမှော်ဆန်လှတယ်။ လူတွေဒီထုတ်ကုန်ကိုမြင်ရပြီးထပ်မံစမ်းကြည့်တော့မယ်လို့ထင်တယ်။ 0-5 အနက်ရောင်ကိုလူတွေကဘာကိုပြန်ယူလာတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရတာတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ GoPro ပါ။ ဒီကိုရောက်ဖို့ ၁၄ နှစ်သာလိုသေးတယ်၊
GoPro Hero5ကထိုက်တန်သလား။
HERO5 အနက်ရောင်နှင့်HERO5တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ 2016 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Hero7ထက်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှု၊ ဆောင်းပါးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အသစ်စက်စက်တပ်ဆင်ခြင်းစနစ်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးကျိုးနွံသောအဆင့်မြှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုကင်မရာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယခုသုံးနှစ်အရွယ် GoPro Hero5နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံကိုရှာဖွေရန်အတွက်ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်ခု၊ ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ နှုန်းဖြင့် 4k mode နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သင်လုံးဝအဆင့်မြှင့်တင်လိုတဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုတကယ်တော့ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အချိန်ကောင်းရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင် ၈ အနက်မှနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးအကြောင်းအရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သင် GoPro lineup အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမည့် Hero Five Black ကိုစောင့်ဆိုင်းချင်ပေလိမ့်မည်။ Thehero7အနက်ရောင်နှစ်နှစ်အတွက်ရလဒ်များမှာအထူးစွဲမှတ်စရာမဟုတ်ပါ။ Hyper s mooth နှင့်ကန ဦး ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဗားရှင်း ၂ ငါဟာအယ်လ်ဖြစ်တယ် အီလက်ထရွန်နစ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပေမယ့်အရင်မော်ဒယ်များမှာသူရဲကောင်း ၅ ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်မှုကိုအထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူး၊ GoPros စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆောင်းပါးအားလုံးမှာပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုဟာမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ် ဆောင်းပါးဘောင်တွင် ၁၀% ခန့်ဖြတ်တောက်ပြီးပိုမိုနူးညံ့သော Boost စနစ်တွင်ပိုမိုတင်းကျပ်သော်လည်းသင်သည် ၁၀% ကိုလျှော့ချရန်အစပိုင်းတွင်မြင်ကွင်းကျယ်ရှိပြီးသင်ဖြတ်တောက်မှုမှာအရေးမကြီးပါ။
Boost mode ၏ပိုမိုတင်းကျပ်သည့်တိကျမှုသည်သင်ရိုက်ကူးမည့်အရာပေါ်မူတည်ပြီးသိသိသာသာမဖြစ်နိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အလင်းကောင်းရန်သင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်များစွာတိုးတက်နေသော်လည်းတည်ငြိမ်မှုနည်းစနစ်များအားလုံးတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ အားလုံးရိုက်ကူးသည့် mode များ၊ Hyper Smooth 2.0 Highmode သည် Hero7ကိုပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုအသစ်ဖြင့်များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ 10% သီးနှံများကိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်းအမြန်နှုန်းနှုန်းနှေးနှေးများကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်မရယူနိုင်ပါ။ တစ်စက္ကန့်လျှင် 4k 60 frames (သို့) 2.7K 120 frames per စက္ကန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာဒီ mode တွေထဲမှာတိုးတက်မှုကိုလည်းဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုသင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုသေးတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော resolution ကို 2.7K ကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ နှုန်းဖြင့်ထိန်းထားနိုင်သည်။bသည် Option အများစုအရောင်သည်ယခင်မော်ဒယ်များထက် ပို၍ ပြည့်နှက်နေပြီးအချို့ကိုတော့မကြိုက်ပေ။ ကင်မရာ၏ Protune ချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်အရောင်သတ်မှတ်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်မပေးသူများအတွက် GoPro အရောင်ကိုပိတ်ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုလျှော့ချရန်သုံးနိုင်သည်။ Herofire သည်ရေစိုခံမည့်ပထမဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ လုံးဝအသစ်ဒီဇိုင်းရှိသည့်မည်သည့်ကိစ္စမဆို၊ ပါးနပ်သောဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများသာပြုလုပ်နိုင်ပြီးထို အချိန်မှစ၍ Hero 8 အနက်ရောင်သည်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သောပထမဆုံးကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမတစ်ချက်တွင်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်သင်မလိုအပ်တော့ပါ။ GoPros ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲတွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ဘောင်သည်အောက်ခြေတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ကင်မရာ၏လည်ပတ်မှုအားပိုမိုအဆင်ပြေသည့်အခါကင်မရာခေါက်ထားသည့်ပုံစံဖြင့်ကင်မရာကိုသံလိုက်အားဖြင့်ထိန်းထားနိုင်သည်။
သင်နှင့်အတူဘောင်ကိုယူရန်သတိရစရာမလိုသော်လည်း၊ ဘက္ထရီနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်သို့ ၀ င်ရန်ဘောင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အမြဲတမ်းခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုဘက်ထရီမှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏ခိုင်မာသောတံခါးကျင်ဖြင့်လွှတ်ပေးထားသည့်ဘေးထွက်အခန်းတစ်ခုရှိသည် နှင့် USB-C အားသွင်းသည့် port ကဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုသင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းဖော်ပြပြီးသင်နှင့် HDMI output ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်တံခါးသည်မလွယ်ကူပါ။ ဖြေလျှော့ခြင်း၊ အိမ်တွင်သင်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ သင်သည်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲလျှင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သွားနေစဉ်ဆုံးရှုံးရလွယ်ကူပြီး၎င်းဒြပ်စင်များနှင့်ထိတွေ့မိသောကင်မရာတစ်လုံးလုံးကိုအစားထိုးနိုင်သည် Replacement တံခါးရရှိနိုင်သော်လည်းပေါင်ကုန်ကျသည်။ 20 or $ 20 Memory card ဖယ်ရှားခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်ခဲပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူသောဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ပြီး microSD-K ကိုရုပ်ရှင်တစ်ခုမတိုင်မီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မတိုင်မီတွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သောအရာတစ်ခုရှိပါကသင်ဖျက်လိုလျှင်သိသာသောကွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင် t ကိုတင်းကျပ်ကြပြီမဟုတ်လျှင်သင်၏ပါးစပ်၌တည်၏ သူကလုံလုံလောက်လောက် thumbscrews ။ ဒီဒီဇိုင်းအသစ်က modellers အသစ်တွေကို GoPro ကိုခေါ်ပြီးအလင်းမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ကင်မရာစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ဦး တည်ချက်ရှိတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းဟာအကာအကွယ်တချို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် frame ကကျောဘက်မှာသိသာထင်ရှားတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုပံ့ပိုးပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ LCD ကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း။ အကုန်အကျများပြီးအသံနိမ့်တဲ့အကာအကွယ်ပေးတဲ့အကာအကွယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကပညာရှိရာရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတော့မဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ DJI Osmo လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုလျင်မြန်စွာ cha ngecapture mode နဲ့ဆက်တင်များသို့ရောက်ရန် ပေါင်းစပ်ထားသော Resolutions of Resolutions Frame Rates Image Stabilization Modes Pro Tunes Adjustment Options နှင့် Field of View (သို့) ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးများ GoPro ကယခုသူတို့ကိုခေါ်သည်။ ယခုကင်မရာသည်သင်မေ့သွားလျှင်အသုံးဝင်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချို့နှင့်အတူလာသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံးဝအသစ်စက်စက်ဖြစ်စေရန်ယင်းတို့ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။ သင်သူတို့နှင့်စတင်ကစားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့၏မူလဆက်တင်များသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ shortcuts တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် image capture screen မှာပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်နှေးကွေးတဲ့ mode ကိုလျင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် frame rate ကိုနှေးလာစေနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် view field ကိုဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူး slider နဲ့ညှိပြီးသင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ turnboost mode ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် တစ် ဦး ပိုမိုတင်းကျပ်သီးနှံ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအနည်းငယ်ပိုတည်ငြိမ်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ပြုပြင်လိုသည့်အရာပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းဖြင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဖြတ်လမ်းတိုများကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏လက်ချောင်းဖြင့် အသုံးပြု၍ သင်ရှာနေသော option သို့ scroll ကို scroll လုပ်ပါ။ ၎င်းကိုပြီးဆုံးသောအခါ ပို၍ လွယ်ကူသည်။ preferences menu တွင် settings အနည်းငယ်ကျန်ပါသေးသည်။ အလွန်ထူးထူးဆန်းဆန်းသည် NTSC မှ PAL သို့ frame rate ကိုပြောင်းရန် option သည် hidden sub-settings ယေဘုယျ anti-flicker ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကင်မရာအားလုံးသည် PAL frame rate များကိုအသုံးပြုစေချင်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် standard ntscs ၏တစ်စက္ကန့်လျှင် 30 frames မြောက်များစွာကိုအသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကနှင့် 2.7k နှင့် 4k mode တို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ယခုတွင်သင်သည် bit rate နှုန်းကို 100 megabits သို့သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင်တိုးလာပြီး DJI Osmo-Action နှင့်လိုက်ဖက်သော Hero5ရိုက်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 60 megabits per second နှင့်တစ်မိနစ်လျှင် ၇၈ megabits ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Hero5နှင့်သိသိသာသာမြင့်တက်သည်၊ သို့သော် Hero7မှအထူးကြီးမားသည်မဟုတ် bit နှုန်းသည် esp ဖြစ်သည် YouTube ကို compressed မလုပ်မချင်းခြားနားချက်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏ဗီဒီယိုကိုတည်းဖြတ်လိုပါကအလွန်အသုံး ၀ င်သောအသုံးဝင်မှုနည်းသောနိမ့်သည့် bitrate mode သည် frame rate ကို hero5 bitrate သို့ပြန်လည်ကျဆင်းသွားစေပြီး၊ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမှမပြုလုပ်ဘဲသင်၏ clips များကိုခွဲနိုင်သည့်အခါအဆင်ပြေသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းကသိုလှောင်မှုနေရာကိုလည်းချွေတာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မျက်လုံးတစ်ခတ်တွင် bit rate ကိုပြောင်းလဲလိုပါကဖြတ်လမ်းတစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါကချိန်ညှိချက်များ၏ setting သည်သင်၏မူလပုံသေဖြစ်ပြီး၊ ဖုံးကွယ်ထားသည့်အရာများသည် Hero 5's နှင့်အတူ 12 megapixel resolution အတူတူပင်ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးသည်ရောင်စုံပုံများပိုများသည်ပုံသေအားဖြင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာနိုင်သော်လည်းပုံမှန်ဆောင်းပါးချိန်ညှိချက်များအနေဖြင့်၎င်းတို့သည် ထပ်မံ၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲမျှမျှတတဝေမျှနိုင်သည်။ ပိုမို၍ ရှေးရိုးစွဲဆက်တင်များကိုအသုံးချနိုင်သည်သို့မဟုတ်အများဆုံးအတွက် RAW mode တွင်ပင်ရိုက်နိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှု။
Super Photo Mode လည်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်စမတ်အလိုအလျောက်အသုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုက်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံပြုပြင်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရိပ်အတွက် HDR option ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ရှုခင်းဓာတ်ပုံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောရိုက်ချက်များနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောရိုက်ချက်များပေါင်းစပ်ထားသည့်အထူးသဖြင့်ရှုခင်းဓါတ်ပုံများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အပိုကျယ်ပြန့်သောမှန်ဘီလူးကိုမကြာသေးမီက Apple နှင့်အခြားသူများအပါအဝင် သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာအလားတူမှန်ဘီလူးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သင်ငါးမျှားနေသည့်ပုံကိုမနှစ်သက်ပါက linear ဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုရန်ပုံမှန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Hero5Black သည် 4k ဆောင်းပါးကို 30fps နှင့် 60fps နှုန်းဖြင့်သာဖမ်းယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်နှေးသောကြောင့်သင်ယခုစက္ကန့်လျှင် 120 frame အထိစံချိန်တင်နိုင်သည်၊ လေးပုံတစ်ပုံမြန်နှုန်းနှေးကွေးသောရွေ့လျားမှုသည် Hero5တွင်ထက်ဝက်သာရှိသည်၊ သင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ 1080p မှာတစ်စက္ကန့်ကို ၂၄၀ ဖရိမ်နှုန်းနဲ့၊ ၁၈၈ မှာ Slow down speed ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့အလင်းရောင်လိုအပ်နေပေမယ့် Hero5အနက်ရောင်ဟာဒီ frame rate ထက်ဝက်ထပ်မံရှိခဲ့ပြီးသင်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ် နောက်ဆုံးပေါ် GoPro နှင့်ရိုက်ကူးထားသော Hero5နှင့် Hero5နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရွေ့လျားသည့်ရိုက်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာယခုရုပ်ရှင်သည်ကင်မရာကိုယ်နှိုက်နှင့် iOS ရှိ GoPro အက်ပလီကေးရှင်းမှ GoPro အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် i ၏ Andro id ဝတ်ဆင်မှုမှေးမှိန်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောကျနေသည်။ သူရဲကောင်း ၅ ကဲ့သို့အလွန်လွယ်ကူပြီးတည်းဖြတ်ရန်လွယ်ကူသောတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်မီဒီယာကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်မီဒီယာလွှဲပြောင်းခြင်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်။ ကင်မရာနှင့်အနည်းငယ်ဆက်သွယ်မှုနှေးကွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည်ဆဲ Hero5မှနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာများတိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ Hero 8 အပါအ ၀ င်ယခုတစ်မိနစ် 4k buddy ကိုလွှဲပြောင်းသော5gigahertz transfer speeds သည် agigabyte အရွယ်အစားတစ် ၀ က်နီးပါး ၂ မိနစ် ၁၇ စက္ကန့်သာကြာမြင့်သည်။ Hero5သည်တူညီသောဖိုင်ကို ၄၈ စက္ကန့်သာသုံးဆနီးပါးမြန်ဆန်စွာလွှဲပြောင်းယူသည်။5gigahertz ကိုထောက်ပံ့သောစမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်အလုံးစုံသုံးစွဲရန်မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ဒီမှာ 8 မှာဆက်သွယ်မှုပြhavingနာရှိရင် Settings to2to4gigahertz, အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ဆောင်းပါးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းစသည်တို့ကိုကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင့်အတွက် GPS ရှိလျှင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း Windows အတွက် GoPro Quickout သည်သိပ်မကောင်းလှပါ။
မှတ်သားစရာမှာနောက်ဆုံးပေါ် 4k HEV မှတ်တမ်းများကိုထိပ်တန်းကွန်ပျူတာနှင့် GPS ဒေတာများရှိဖိုင်များတွင်ပင်ချောချောမွေ့မွေ့ပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီးမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းက GPS ကိုမဖွင့်ခြင်းသတင်းကိုနှေးကွေးစေသည်။ Desktop app တွင် gaug များကိုထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Desktop app ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လက်ရှိစမ်းသပ်နေသည့်အသံများဖြစ်သော GoPro Plus သို့အလိုအလျှောက်ပို့ဆောင်ပေးမည့်ကင်မရာမှဖိုင်များကိုတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ။
GoPro အသစ်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်ပြီ၊ နောက်ခံဆူညံသံနည်းနည်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်။ လေတိုက်သံကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ရှေ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်မိုက်ကရိုဖုန်းအသစ်တစ်လုံးငါ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကနေသင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပုံရတယ်။ မေးစေ့နှင့်သင့်တွင်ယခုရွေးချယ်ထားသောမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် ၃.၅ မီလီမီတာအကွာအဝေးရှိသော directional microphone နှင့် Mediamod တို့ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်စျေးကြီးသောပြင်ပ USB-C မိုက်ခရိုဖုန်း adapter ကိုသုံးနိုင်ဆဲဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးကင်မရာ၏တစ်ဖက်လုံးကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်ကြာရှည်စွာရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံနှင့်အလွန်တည်ငြိမ်သောပုံကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ဤနေရာတွင် 8 ၌ရှိသော Era 2.0 အသစ်တွင်ယခုအချိန်တွင်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အလိုအလျှောက်မြန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။
settings ကိုစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ၊ Record ကိုနှိပ်ပါ။ ဆောင်းပါး၏အပိုင်းတစ်ခုကို real time သို့နှေးကွေးစေရန် screen ပေါ်တွင်သင်ထိပုတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမည်မျှမကြာခဏအသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ရလဒ်များမှာကောင်းမွန်လှသည်။ live burst mode သစ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး Apple စမတ်ဖုန်းများ၌ live photos နှင့် 4k mode များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ Panasonicg80it ကဲ့သို့သောကင်မရာများတွင်တစ်စက္ကန့်နှင့်တစ်ပုံခွဲရိုက်သည်။ Shutter ခလုတ်မတိုင်မှီနှင့်အပြီးတွင်သင်ရရှိသော 90 frame မှမည်သည့် frame ကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 4k ဆောင်းပါးတစ်ခုမှရုပ်ပုံကိုဖမ်းယူပေးသောပုံရိပ်အားပုံမှန်အားဖြင့် 8 megapixels ဟုသတ်မှတ်သည်။ သင်သည်၎င်း၏ resolution ကို 12 million pixels အထိတိုးနိုင်သည်။
Instagram ကိုအလျင်အမြန်မျှဝေရန်အတွက်အသုံးဝင်သောပုံသဏ္formatာန်ပုံစံဖြင့်ယခုသင်လည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံတူအမျိုးအစားဆောင်းပါးများကိုပိုနှစ်သက်သည်၊ ဆောင်းပါးများနှင့်ဓာတ်ပုံများနှစ်မျိုးစလုံးကိုလှည့ ်၍ မြင်ကွင်းပေါ်ရှိအိုင်ကွန်ခလုတ်ကို YouTube နှင့် GoPro အက်ပ်မှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ 1080p တွင်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုလွှင့်ပါ။ Hero7သည် feature ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် Hero5blackGoPro သည်၎င်း၏ GP 1 ပရိုဆက်ဆာကို၎င်း၏ကင်မရာအကွာအဝေးသို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက် 720p တွင်သာလျှင်၊ ယခုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင် ၈ မျိုးဆက် ၃ ဆက်အထိရှိခဲ့ရာနှစ်များတစ်လျှောက်ဖြစ်လာသည်။ လာကြပြီ၊ သို့သော်၎င်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောပုံတည်ငြိမ်မှုကိုခွင့်ပြုပေးပြီးကင်မရာအသစ်များရှိအခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များသည်လည်း menu ဖန်သားပြင်ကို ဖြတ်၍ မြန်ဆန်စွာရွေ့လျားသွားသည်။ သို့သော်သူသည်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း Hero5black Aside ထက်ငွေအချို့သက်သာစေသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာသို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းမပြုရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိလျှင်၎င်း၊ အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းdမှန်ဘီလူးရှိပါကယခင်မော်ဒယ်များမှဖြုတ်တပ်နိုင်သောမှန်ဘီလူးကိုပေါင် ၂၀ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၂၀ ဖြင့်အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သည်။ ၎င်းမှန်ဘီလူးအသစ်များကိုနှစ်ဆပိုမိုထိရောက်စွာကြေငြာနိုင်သည်။ GoPro ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ယခုပြန်ပို့ရန်အတွက်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကင်မရာနှစ်ခုပါသည့်သူတို့၏ GoProPlus subscription ကိုတစ်လလျှင် ၅ ပေါင်သို့မဟုတ် ၅ ဒေါ်လာဖြင့် subscribe လုပ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့မျှော်လင့်ခြင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ။ တစ်နှစ်လျှင်အပြောင်းအလဲကောင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းထားသည့် Cloud သိုလှောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအချို့မှ ၅၀% ကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကောင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသော်လည်းစျေးပေါသောမှန်ဘီလူးအစားထိုးမှုသည်များစွာသက်သာပြီးလွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးနှစ်အရွယ် GoPro Hero5အနက်ရောင်အနက်ရောင်ကတည်းကအပြောင်းအလဲအချို့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအင်္ဂါရပ်မှာအနည်းဆုံးအခြားအဆင့်မြှင့်တင်မှုများအများစုသည် 'Nice Tohave' အမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းအများစုမှာမူ သူတို့သည်ကင်မရာအသစ်ကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လှုပ်ရှားမှုအားကစားများအတွက်ကင်မရာကိုအထူးအသုံးမပြုပါကယေဘူယျအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောကင်မရာကဲ့သို့၎င်းသည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်မထိုက်တန်လျှင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သငျသညျအဟောင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူအချို့သောကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။ သင် 4k resolution ကို frame 30 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး hero4 အနက်ရောင်မှဖြစ်သဖြင့်ရွေ့လျားမှုနိမ့်ကျသောဗီဒီယိုရိုက်ကူးရန်အတွက် resolution လျှော့ချနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘီလူးကိုလဲလှယ်ခြင်းကလေပြေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖြတ်လမ်းများကဲ့သို့သော Hero 8 အနက်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲ update ၏အချို့သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတာပေါ့၊ မင်းက Hero6နဲ့အထက်အဆင့်မြှင့်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီမော်ဒယ်တွေအားလုံးအတူတူပဲ၊ အခုသုံးနှစ်အရွယ် GP-One ချစ်ပ်ပဲ။
လူသိများသောစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများကအနည်းဆုံးဈေးသက်သာစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောစွမ်းအားကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရုပ်ပုံတည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်လျှင် Hero7Black ဟုခေါ်သောစျေးနှုန်းချိုသာသော DJI Osmo Action သို့တိုင်တိုင် ဤနေရာတွင်အပိုအားသွင်းမှုအနည်းငယ်အတွက်စျေးနှုန်းတူညီမှုရှိခြင်းအနက်ရောင်ရှစ်ရောင်သည်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှုနှင့်အတူအလွန်အသုံး ၀ င်သည့်အကြမ်းခံဘက်စုံကင်မရာဖြစ်စေသည့်အနက်ရောင်ရှစ်ရောင်သည်အချည်းနှီးသောဒီဇိုင်းသစ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာကို ၀ ယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသောလက်ရှိအသုံးပြုနေသောနောက်ဆက်တွဲကိုအောက်ပါအသိပေးပါ။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုပါမည်။ ကျွန်ုပ်ဖြေကြားရန်အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်မည်။ သင်ပြုခဲ့သည့်ဆောင်းပါးကဲ့သို့ vid eos ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်၎င်းကိုအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်ရန်အပတ်စဉ်တင်ပို့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စာရင်းသွင်းပါကမိသားစုထက် ပို၍ အထောက်အကူပြုသည်။ အကယ်၍ သင်ဖြစ်လိုပါကခေါင်းလောင်းသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ အကြောင်းကြား ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုတင်လိုက်သောအခါကြည့်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
GoPro Hero5မှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသလား။
၎င်း၏ ultra wide angle မှန်ဘီလူးကြောင့်ဖြစ်သည်GoPro HERO5ထိုမော်ကွန်းပန်းချီကားများသို့မဟုတ်အလွန်ရင်းနှီးသောအတွင်းပိုင်းများကိုသင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသေးပြီး၎င်းကို HERO6 အသစ်ဖြစ်သောလက်ရှိတွင်အစားထိုးလိုက်သော်လည်းGoPro HERO5နေဆဲအလွန်အသုံးဝင်သည်နှင့်ခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံး GoPros တစ် ဦး ။
GoPro က iPhone ထက်ပိုကောင်းသလား။
အဆိုပါအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားရိုက်ချက်များiPhoneအထူးသဖြင့်မြန်ဆန်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပိုမို၍ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပညာရှင်အဆင့်သို့အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်အခြေအနေများတွင်ပင်၎င်း၏အထူးထင်ရှားသော hypersmooth တည်ငြိမ်မှုကြောင့်အစုအဝေးကိုအာရုံစိုက်ထားသည်။ ဒါဆိုမင်းကဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်၊ပညာရှင်အဆင့်သို့သေချာပါတယ်ပိုကောင်းတယ်မဆိုiPhone။
GoPro5သို့မဟုတ်6ကပိုကောင်းလား။
မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးသည်ရောင်းချဆဲဖြစ်သည်ပညာရှင်အဆင့်သို့Hero6 Black သည်အဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်GoPro Hero5စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တွေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တွေတိုးမြှင့်နိုင်အောင်မြန်ဆန်တဲ့ internal processor နဲ့အတူအနက်ရောင် Theသူရဲကောင်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Black သည် 4K resolution ဖြင့် 30fps recording နှင့် 120fps 1080p ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။
အားလုံးGoPro ရဲ့ဖြစ်ကြသည်တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်သူတို့ကသို့သော်ဒီဇိုင်းများကိုမပို့မီပြည်နယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်။ပညာရှင်အဆင့်သို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အ ဦ ရှိသည်တရုတ်ဒါလုပ်ပါ27.01.2021
GoPro Hero5သည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီလား။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cube လေးကိုဒီနေ့ပြီးနောက်ပြုတ်လိုက်တယ်ပညာရှင်အဆင့်သို့နောက်ဆုံးပေါ် Hero7 ကင်မရာများထုတ်ဖော်ပြသ Theသူရဲကောင်းSession သည်၎င်း၏ swan သီချင်းဖြစ်သော Hero6 Black နှင့်သီဆိုခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါHero5 အနက်ရောင်တရားဝင်ပါပြီရပ်စဲခဲ့သည်Hero7 အဖြူ၊ ငွေနှင့်အနက်ရောင်ထုတ်ဝေမှုများဖြင့်အစားထိုးသည်။
GoPro Hero5ကိုဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
GoPro သူရဲကောင်း 5: အင်္ဂါရပ်များ
ကင်မရာနှစ်ခုလုံးလုပ်နိုင်ဘောင် ၃၀ တွင် 4K ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးပါ။ သူတို့လုပ်နိုင်ထောင့်ကျယ်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုလည်းအတူရိုက်ကူးနိုင်သည်သူရဲကောင်း 5အနက်ရောင် RAW တွင်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
Go Pro Hero5သည်ရေစိုခံနိုင်ပါသလား။
TheGoPro HERO5ဟုတ်တယ်ရေစိမ်ခံသော၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ) ရှိအိမ်ရာမရှိဘဲ၊ ယခင်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသောတည်ဆောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ပညာရှင်အဆင့်သို့မော်ဒယ်များ။
သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီယာနှင့်အခြားအရာများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Shutter ခလုတ်တစ်ချက်တည်းကသာကင်မရာကိုအားသွင်းပေးပြီးအလိုအလျောက်စတင်မှတ်တမ်းတင်သည်။ ဒီဇိုင်းဖြင့်အကြမ်းခံနိုင်သောကြောင့် HERO5 Session သည်အိုးအိမ်မရှိဘဲ ၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ) အထိရေစိုခံနိုင်သည်။
GoPro HERO5 Black သည်ရေစိုခံပါသလား။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် GoPro Care သို့မဟုတ် GoPro Plus ကဲ့သို့သောမည်သည့် GoPro ၏ add-ons များကိုမဆိုဆန့်ကျင်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့ကို ၀ င်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းထက်ပိုသောအရာများအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ရေစိုခံကြယ် ၅ လုံးမှ ၁.၀ လား? မနီးစပ်ဘူး။
GoPro Hero5session အတွက်ဘက်ထရီများလိုအပ်ပါသလား။
Karma၊ 3-Way, Remo နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အသက် ၃၀ ကျော် GoPro တောင်နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုဖမ်းယူပါ။ GoPro Plus subscription ဖြင့် HERO5 Session သည်သွားလာရင်းလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်မျှဝေရန်အတွက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတိမ်တိုက်ထဲသို့အလိုအလျောက် upload လုပ်နိုင်သည်။ 1 လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီများလိုအပ်သည်။